Ikhaya / Amanzi okugeza / Ukuphathwa Kwamabili Okuthinta Ukugeza / I-WOWOW Brushed Nickel Bathroom Centerset
Kulinganiselwe ngo- 4.91 Ngaphandle kwe-5 okusekelwe 35 izilinganiso ikhasimende
(35 Izibuyekezo ikhasimende)
Ama-Amazon US I-Amazon CA
Isithambisi sendlu yokugeza iBitter Nickel yeWOWOW iyabiza. Umkhiqizo osezingeni eliphezulu ngesitayela sanamuhla. Thenga Bathroom yethu isikebhe Brunch Nickel manje!
2321200 imiyalo yokufaka
Isikebhe sokugezela sihlanganisiwe nickel 2321200
Ingabe usukulungele ukufaka isitayela noma ukuqala kabusha indlu yakho yokugezela? Ku-WOWOW sikholelwa ukuthi ukuklama noma ukuqamba kabusha igumbi lakho lokugezela kumele kwenziwe ngezinto ezisezingeni eliphezulu kakhulu zokusebenza okuhle. Futhi nokho lokhu kufanele kube okungabizi kunoma ngubani. Ukuhlobisa noma ukwenza kabusha indlu yakho yokugezela ezikhathini eziningi akuwona neze umcimbi oshibhile. Futhi ngenxa yezizathu zesabelomali noma izithiyo ezingabikezelwa, umuntu angahle afune imali eshisiwe njengoba esephelelwe yisabelomali. Ku-WOWOW siyakuqonda lokhu, futhi ngenxa yalokho kungenza ngikwazi ukuthenga izikebhe eziphezulu zemakethe ngamanani aphansi. Ingabe lokho kuzwakala kungakholeki? Hhayi uma ufunda ngathi nangemikhiqizo yethu.
I-WOWOW iluhlobo olusha olusha, olukhiqiza izinto ezinhle kakhulu ngamapayipi njengamapayipi. Ukufanisa zonke izinhlobo zemiklamo nezitayela, i-WOWOW ihlala inikezela ngenketho ebanzi yamakhompiyutha ekhwalithi ukufanisa isidingo sabo bonke abathengi bethu. Futhi njengoba ubona kuphothifoliyo ye-faucet yeWOWOW, siqashe abaklami abahamba phambili ukukunikeza izesekeli zokugezela ezingalungele noma yimuphi umagazini wokuqamba. Sikholwa ukuthi i-WOWOW ikunikeza isilinganiso esihle kakhulu samanani emakethe ngamalungiselelo ethu okuqamba aphezulu, imikhiqizo esezingeni eliphakeme, kepha nokho ngamanani akhokhelekayo.
Isikhuhlu sokugezela sesimanjemanje se-nickel
Le faucet yasendlini yokugezela eyakhiwe yakudala enesimanjemanje ene-nickel ye-WOWOW inezimbambo ezimbili zamanzi, enye inamanzi afudumele kanti elinye lamanzi abandayo. Lo mklamo we-retro ukhanyisela igumbi lakho lokugezela ngokuthinta okukhethekile. Njengoba kungenzeka wazi, amatholethi endlu yangasese ayizindawo zokugxila zemvelo, yize kuyizinto ezincane kunazo zonke zokugezela. Ngalesi sizathu uyakwazi ukunika ukuthinta okukhethekile kwe-retro endlini yakho yokugezela, futhi ungagxili ekusebenzeni nasekhwalini. Le faucet yokugezela eyakhiwe nge-nickel elula ukuyihlanganisa neminye imishini yokugezela yeWOWOW etholakala ngesitayela esifanayo futhi uyiqedile njengoba injalo isiteketisi sendlu yokugezela.
Ukuqedwa kwe-nickel broned kwenziwa nge-nickel coating eseqediwe ukuyifaka nge-brashi ye-wire. Yiso kanye isizathu esenza ukuthi le failet yokugezela i-nickel ifumane ukubukeka kwayo okubhalwe umbhalo. Lokhu kuqedwa kwe-nickel kunika le faucet yokugeza ithoni elifudumele nelingafani nalokhu. Ngaphandle kwalokho, kwakha ukubukeka okukhethekile ngokuhlukahluka kwako kokukhanya nemithunzi ebusweni wale faucet yokugeza. Ngenxa yesiteketiso sendlu yakhe yokugezela eyaziwa ngokuthi yi-WOWOW's faucet nickel bekungeke isendaweni yanoma yiliphi ihhotela lezinkanyezi ezinhlanu noma izakhiwo ezikhethekile.
Isikhiphi sendlu yokugezela ebangeni lokuqala siba nickel
Uqaphela ngokushesha ikhwalithi yale faucet yokugeza lapho unayo ezandleni zakho. Akukho lutho olucasulayo ukwedlula ukufaka ifenisha yokugezela entsha eqala ukukwehla ngemuva kwesikhashana. Lo msindo wokudonsa ungakwenza uhlanya, ikakhulukazi ebusuku. Lapho-ke, kwesinye isikhathi asikho esinye isisombululo ngaphandle kokufaka isiphephe sendlu yakho yangasese. Lowo kungaba ngumcimbi obizayo, futhi isikebhe sakho esishibhile sendlu yangasese asizange sibe eshibhile ekugcineni. Ku-WOWOW ufunda ngakolunye uhlangothi ukuthi imikhiqizo yekhwalithi ephezulu akudingeki ukuthi iveze intengo ephezulu. I-WOWOW ifakazela ukuthi ungathola ikhwalithi ephezulu ngentengo engabizi. Le nqola yokugezela igudwe i-nickel enikezela isisekelo esikhulu sethusi, igobolondo lensimbi engenasisekelo kanye nokwakhiwa okuhlala isikhathi eside. Ukuqina kuyinjongo eyinhloko lapho kufakwa le faetet yokugezela eyi-nickel yeWOWOW. Futhi yilokho ozokuqaphela ngokushesha.
Wonke kampompi wesitofu sokugezela se-WOWOW se-nickel senziwe nge-zethusi. Le faucet yokugezela eyakhelwe ngesandla ayisebenzi neze nge-cUPC- ne-NSF 61-Certified. Isikebhe sokugezela esine-nickel ye-WOWOW sibonisa umfudlana oqinile wesplashfree. Ngaphandle kwalokho, ngeke uqaphele noma imiphi imicibisholo yomunwe ebusweni bale faipithi yokugezela. Kulula ukuyihlanza ngakho-ke kulula ukuyigcina. Ngale ndlela uzoba nesikhipi sokugezela esicijile esichichima isikhathi eside.
Isikhuhlu sokugezela esisebenzayo esisebenzayo esibizayo
Isikhuhlu sokugezela seWowow's yokugezela sidlalwe kahle saphothulwa ngesimo sobuchwepheshe bobuchwepheshe ukukunikeza ukuheha nokukhuthazela kwesikhathi. Futhi konke lokhu ngentengo engabizi. Ngaphezu kwakho konke, i-ABS-aerator ikusindisa amanzi angama-50%, ngakho-ke uzokubona nalokhu kumbhalo wakho wamanzi. I-WOWOW ngakho-ke kukusiza ukusindisa ngezindlela eziningi.
Ngaphandle kwentengo ekhangayo kanye nezici zokonga amanzi, lesi sikhoseli sokugezela esinegumbi lokugezela kulula kakhulu ukusifaka. Le faucet yokugezela enamasentimitha angama-4 ingafakwa echibini lokugezela elinemigodi eyi-3 eyakhiwe ngaphambili. Lesi sikhungo sokugezela esakhiwe ngokwezitezi esakhiwe kahle sifaka ne-pop up stopper. Zonke izinto zokufaka ziza zifakiwe nefenisi. Le failet yokugezela eyakhiwe nge-nickel ingafakwa kalula ngemiyalo yokufaka ecacile. Noma ungeyena uchwepheshe. Ngale ndlela ungagcina izindleko eziningi.
Ukuhanjiswa kwamahhala nesiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-90
Njengoba i-WOWOW imele imikhiqizo yayo futhi iqinisekile ngekhwalithi yemishini yayo, isikhathi seminyaka emithathu siyanikezwa ngaleli bishini lokugezela eligandayiwe. Uma isikebhe sokugezela esenziwe nge-nickel ye-WOWOW singeke sisebenze ngokweqile njengoba kuthenjisiwe, uzothola isitetjhi sokugezela esakhiwe sangasese esisha ngaphandle kwenkinga.
Ngaphandle kwalokho, i-WOWOW ikunikeza isiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-90. Uma ucabanga ukuthi asikuhambisanga lokho esikunikile, ungathumela iselucet lakho lokugezela usibuyisele ngaphandle kwemibuzo ebuziwe. I-Wowow imele ukugcina izethembiso zayo, futhi uma ungenalo lowo muzwa, sizothatha umthwalo wethu walokho. Lapho nje sithola isikulufu sokugezela esine-nickel emuva, uzothola imali yakho ngokushesha!
Njengayo yonke imikhiqizo yeWOWOW, le faucet yokugezela ene-brick nickel izohanjiswa mahhala kunoma iyiphi indawo emhlabeni. I-WOWOW inezithameli ezibanzi emhlabeni wonke futhi bonke bayayazisa ikhwalithi esebenza kahle yeWOWOW okufanele inikezwe. Sifisa ukuthi nawe uzame umkhiqizo wethu. Futhi sinesiqiniseko sokuthi awusoze wafuna ukuguqukela kwezinye iziphambeko.
Izinzuzo ze-Bathroom Faucet Bronze Nickel ngamafuphi:
 Umklamo wakudala kepha wesimanje
 Ukuqedwa kwe-nickel eyakhiwe ngesandla
 Kulula ukuhlanganisa namanye amatholethi okugeza
 Isikhiphi sokugezela esiphezulu
 Kwenziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme
SKU: 2321200 Categories: Amanzi okugeza, Ukuphathwa Kwamabili Okuthinta Ukugeza Tags: 4 ye-intshi, I-Nickel ehlutshiwe, Hlukanisa Isiphatho
9 x 2.2 x amasentimitha angu-5.1
I-NSF ceramic disc valve, amanzi wokuxuba, izimbobo ezi-3 ngaphakathi. Idizayini yezikhungo, okulula ukuyifaka
Deck egibele, 3 hole hole 4 intshi centreet
Amanzi ashisayo namanzi abandayo alawula ngokwehlukana
Ukulawulwa kwamanzi ashisayo nabandayo
Impela isinki ebengiyifuna. Ngiye ezitolo ezimbalwa futhi angitholanga lutho engiluthandile. Lokhu bekulula kakhulu ukukufaka, futhi kuza nakho konke okudingayo kufaka phakathi okunamathiselwe kwepayipi kanye nomsele. Kulula ukuyihlanza, ibambelele kahle ezinganeni, ayikwazi ukucela okuningi.
Le ompompi enhle ebukeka eza nezingxenye eziningi ebesizidinga kunalokho ebesikulindele. Besingadingi ukuya esitolo ukuyothenga izingxenye ezingaphansi kosinki kwesinye isikhathi ezingafiki nompompi. Siphinde sazisa intengo yale nto. Sizwe sengathi sithole ukuthengiselana okuhle.
Ngikuthengile lokhu ngifuna okuthile okungabizi kakhulu. Ngimangele ukuthi lizwakala lisinda futhi liphezulu kangakanani lapho ngilivula. Zibukeka kahle, nangengxenyana yezindleko zemikhiqizo eholayo.
kungithathe amahora amabili ukungafaki ompompi ababili abadala. Le yakhelwe kangcono kakhulu, hhayi kuphela engingayifaka ku- ~ 2 min, kepha futhi ngikholwa ukuthi ngingayifaka ngaphansi kwemizuzu engu-10 lapho kudingeka esikhathini esizayo. Bengizibuza ukuthi kungani ompompi bakudala kwakudingeka baklanywe kanzima kangaka ukukhipha.
Ngangijabule kakhulu ngale mpompi. Kusindayo, kuyizibambo ezibushelelezi, ukuhamba kahle kwamanzi futhi kungompompi bekhwalithi. Nganginamahloni, hhayi umkhiqizo ojwayelekile engiwubona ungihlaba umxhwele. Nakanjani sizowuthenga lo mkhiqizo futhi.
Isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu lokugeza esimangalisayo. Konke kwafakwa ukwenza ukufakwa kube lula. Thanda ukubukeka nokuzizwa kompompi wami omusha!
Le ompompi yayiyiyona kanye engangiyifuna ngenkathi ngihlela amamodeli wokugezela. Ngiyithande kakhulu ngokugeza kwethu okuyinhloko ukuthi ngiyithengile futhi enkulu. I-sleek futhi isitayela. Futhi intengo ilungile. Kweqe engikulindele
Umkhiqizo omuhle kakhulu, ubukeka muhle kakhulu futhi kulula ukufaka. Ukupakisha kwakukuhle, kuvikela umkhiqizo. Ngiyithanda kakhulu ipompo yezinga eliphakeme ukuze ukwazi ukuthola izandla zakho ngaphansi. Isiphetho esihle kakhulu, sakhiwe ngokuqinile.
Umpompi omuhle kakhulu kanye nama-accesories ahlangana nawo. Amapayipi wokuphotha aboshiwe mahle, made (ama-20 ″ plus) nomsebenzi osindayo, futhi idreyini nayo iyasiza futhi!
Ngijabule ngempela ngalokhu kuthenga, isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu sibukeka sisihle futhi sizizwa siqinile ngentengo. On top of that you also get the flex lines which were quality solid… .KODWA WAIT! akupheleli lapho, uthola ne-valve ezivelelayo yohlobo obekulula ukuyifaka, okulula ukuyisebenzisa futhi ebukeka kahle nayo. Anginakho ukuzisola.
Sasiyithanda le ompompi. Ifike iphelele ngokudonsa nokufakwa kokuxhuma kwamanzi. Ngokuqinisekile nginga-oda lo mkhiqizo futhi
Le iphakethe elihle futhi elilula kakhulu ukufaka. Kuza nakho konke okudingayo ukufaka. Kuthathe imizuzu embalwa nje ukuyifaka futhi kubukeka futhi kusebenza kahle. Ngizobe ngithenga enye.
Ngoba umpefu ompompi okhokhelwayo wawusondele nje ekhawunteni futhi amanzi aphuma kusinki. Ngithengile le ngcezu. Imnandi kakhulu kunaleyo efike ekhempini yethu futhi izolungela ukusetshenziswa endlini yethu. Siyajabula ngalokhu kuthenga.
Intengo enhle futhi enhle. Kulula ukuphatha. Thanda i-valve yokucindezela. Bengingazi nokuthi kufike nayo.
Lompompi usebenze kahle futhi ngentengo engcono kakhulu kunanoma yisiphi isitolo esiseduze kwami. Kwakulula ukuyifaka futhi kubukeka kukuhle.
Kwangijabulisa ukuthola lokhu ngentengo enkulu kangaka. Ikhwalithi ifana nentengo kepha isebenza kahle ngendlu yokugezela yengane yethu.
Uma bengingakwazi ukukhasa kusinki wami futhi ngizwe amandla ahambisana nale ompompi nginga. Nginomuzwa wokuthi izandla zami zithola ubhapathizo njalo lapho amanzi avela kulo Nkulunkulu ethumela umpompi zibahlasela.
Sifake ezi-2 kulezi zinyanga ezimbili ezedlule ..
Ziyesabeka! Zihle kakhulu futhi ziyinani elihle kakhulu !!
Ngithenge amasethi amathathu ala masethi ompompi bamanzi. Bengingachitha imali ephindwe kabili kodwa bengingenayo kubhajethi yami. Lezi yikhwalithi enhle kakhulu futhi zibukeka zizinhle. Ngibe nokufakwa kobungcweti obuchwepheshe futhi wathi angenye yamasethi amahle kakhulu awabonile. Ngingancoma kakhulu.
Ngisebenzise lokhu ukukhulisa izindlu zami zokugezela. Kulula ukufaka nokusebenza kahle. Ngiyayithanda indlela esebenza kahle ngayo
Ithempulethi engcono kakhulu yokugezela engiyithengile! Intengo enhle, ukufaka okulula ukubukeka kwesitayela, kusebenza kahle!
umkhiqizo omuhle. uma udinga enye ngokuhamba kwesikhathi izothenga enye futhi iyifake ibukeke kahle.
Umbhobho omkhulu ongena esikhundleni sokugezela ongaphansi. Ukufaka okulula, futhi kusebenza ngaphandle kwezithiyo. Ufuna ukuthenga okufana nendawo yokugezela ephezulu ngokulandelayo.
Bekungafanele ngithenge okunye ukuze ngithathe indawo yompompi wami onamandla. Ukubukeka okuhle. Inani elihle.
Ikhwalithi nenani liyi # 1 ngale nto. Ukufakwa okulula kakhulu nakho konke okudingayo ekufakweni kusebhokisini. Awukwazi ukukushaya lokho kwenye indawo.
Sathenga ezi-3 kulezi zombili izindlu zethu zokugezela. Ngiyasithanda isitobha sokukhipha amanzi. Kuyinkinobho vs isikulufa sento. Kwenza ibukeke ihlanzeke kakhulu futhi kulula ukuyisebenzisa. Kukonke, idizayini futhi isebenziseka ngezindlela eziningi.
Kufakiwe cishe emizuzwini engu-30. Thuthukisa kusuka kokudala futhi bekungumqondo omuhle ukwenza indlu yethu yokugezela ibe yesimanje
Thanda isitayela nesiphetho se-nickel esibhrashi. Kulula ukufaka. Nginezindlu zangasese ezintathu futhi nginalo leli ompompi kuzo zonke.
Kuthengwe lokhu ukufaka ompompi nabadala endaweni yokugezela engaphansi komhlaba esetshenziswa njalo. Kwafika nakho konke engangikudinga kulo msebenzi. Ngihlabeke umxhwele ngekhwalithi yale mpompi.
umkhiqizo omuhle kakhulu! Kungimangazile ukuthi yenziwa kahle kanjani. Ngizobe ngithenga enye futhi enye indlu yami yokugezela.
Ngishintshe zombili izinhlangothi zokugeza okuyinhloko futhi bekuwumoya. Kulula ukuyifaka futhi ibukeka iyinhle ngempela futhi ngaleyo ntengo ngizokushintsha namanye amagumbi okugeza.
Kulula ukuyifaka, yesimanje, futhi engabizi kakhulu. Kubukeka kumangalisa egumbini lami lokugezela.
Inani elikhulu libukeka libiza futhi lisebenza kahle. Inani langempela lemali engingayincoma kulokhu uma udinga ompompi abasha noma ukubukeka okuthuthukisiwe nje
Sasidinga ompompi ukufanisa ishawa yethu futhi izitolo zethu zasekhaya zazingenakho esikuthandayo. Le ompompi isebenza kahle! Kulula ukufaka nokubukeka kwesigaba esiphakeme
Ngathenga eyodwa yale mpompi futhi ngayithanda kakhulu ngathenga ezinye ezimbili zamanye amagumbi ami okugeza. Kwakunentengo ephansi futhi kwahlanza amasinki ami okugeza! Umkhiqizo ufike ngokushesha futhi usesimweni esihle kakhulu. Umpompi omangalisayo Ngincoma kakhulu le ompompi!
Intengo beyiqinisile futhi bekulula ukuyifaka. Ngijabule kakhulu futhi ukuthi isebenza kahle kanjani nokuthi ibukeka kahle kanjani. Umpompi okahle ngempela futhi ubukeka umuhle. Ukufaka okulula okulula